Iraniana Fizisiana Nofonjaina Fa Tsy Nandà Tsy Hiasa Amin’ny Nukes, Maty Tany Am-ponja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2016 3:32 GMT
Nanandratra ny tantarany ireo mpomba an'i Kokabee tao Iràna sy nanerana izao tontolo izao, nifantoka tamin'ny fahasalamàny izay niharatsy tny am-ponja, toerana izay tsy nahazoany fitsaboana sahaza azy. Tamin'ny 2011 i Kokabee no voasambotra raha nanandrana ny handray fiaramanidina hiverina ho any Etazonia, toerana namaranany ny fiofànany taorian'ny nahazoany ‘doctorat’ tao amin'ny anjerimanontoln'i Texas ao Austin. Nosamborina izy ary notànana am-ponja noho ny nandàvany tsy handray anjara amin'ny fikarohana ara-tafika ao Iràna.
Marobe no niezaka ny hisarika ny saina ho amin'ny tranga manjo an'i Kokabee, nahitàna olona 31 nahazo ny loka Nobel tamin'ny fizika ary ny Kaomitin'ireo Siantifika Voatohintohina, izay namoaka taratasy iray misokatra ho an'ny filoha Iraniàna Hassan Rouhani. Ny hafa nanaitra ny Sekreteram-panjakàna Amerikàna John Kerry sy ny Minisitra Iraniàna misahana ny Raharaham-Bahiny Javad Zarif, izay tomponandraikitra tamin'ny fifampiresahana hifanakalozana gadra ary ny fifanarahana monìmba ny noklaery natao vao haingana teo, mba hirotsaka an-tsehatra amin'io raharaha io, izay mifamatotra amin'ny ezak'i Iràna momba ny nokleary.
Malaza be eny anivon'ireo Persiana mpibitsika ny#FreeOmid . Takian-dry zareo ny famotsorana ity tanora siantifika ity & marary ankehitriny
2 herinandro izayFanabeazana